Home News War Deg Deg ah:-R/wasaare Kheeyre oo ku dhawaaqay Galaha Wasiiradda ee ka...
War Deg Deg ah:-R/wasaare Kheeyre oo ku dhawaaqay Galaha Wasiiradda ee ka maqna Xukumadda (Magacyadooda)
1.Hassan Moalim Hussein Diinta iyo owqaafta.
2. Hassan Ali mahamed Wasiirka Gaashandhiga
3.Dahir Mohamud Gelle Wasiirka Warfaafinta
4. Abdi aziiz abdullahi mohamed Wasiirka Tamarta iyo biyaha.
5. Hamza said Hamza Wasiirka Gargaarka iyo masiibooyinka
6.Abdi fitah mohamed Ibrahim Wasiirka wasaarada Howlaha Guud iyo Dib u dhiska
Xubnaha loo magacaabay Wasiir Dowlayaasha.
1.Dahir abdi abdullahi Wasiir Dowlada Wasaarada ganacsiga
3. Mohamud mohamed Bonow Wasiiru Dowlaha Amniga
Xubnaha loo magacaabay Wasiir ku xigeenada.
1. Isxaaq mohamed mohamud wasiir ku xigeenka Arimaha Gudaha
2. Adan Isxaaq Ali wasiir ku xigeenka Warfaafinta.
3.Abdirahman Idan Yonis Wasiir ku xigeenka Boostada iyo isgaarsiinta
4.mohamed Saciid abdullahi Wasiir ku xigeenka Caafimaadka
5.Abdirashid Mohamud Hassan Wasiirka ku xigeenka Gargaarka iyo maareynta Masiibooyinka